Ehe na Paradise Wɔ? – 4Jehovah (Yehowa)
So Abraham, Isak ne Yakob Bɛsɔre aba Asase so anaasɛ Ɔsoro?
“Nanso Meka akyerɛ mo sɛ nnipa bebree fi apuei fam ne atɔe fam bɛba ne Abraham ne Isak ne Yakob ato nsa adidi wɔ ɔsoro Ahenni no mu”-Mateo 8:11 WFN
So Nnipakuw Kɛse bɛtraa Asase so anaasɛ Ɔsoro?
“Eyinom akyi no metee nnipakuw kɛse bi nne denneennen wɔ soro”–Adiyisɛm 19:1 WFN
So Paradise yɛ Beae a Yesu Wɔ?
“Nokware Meka akyerɛ wo nnɛ sɛ wobɛka Meho wɔ Paradise”-Luke 23:43 WFN
Tagged Paradise ne Ahenni no
← So Wode Yehowa Nhyehyɛe a Woayɛ ama Nkwa yɛ Adwuma?
Woyɛ Sotie Ma Yehowa? →